ပန်းသေပန်းညှိုးရောဂါ ကာကွယ်ဖို့ နည်းလမ်း ၁၀ ခု – Gentleman Magazine
ပန်းသေပန်းညှိုးရောဂါ ကာကွယ်ဖို့ နည်းလမ်း ၁၀ ခု
တစ်ခါတစ်လေမှာ ထောင်မတ်မလာတာက ပန်းသေပန်းညှိုးရောဂါကြောင့် မဟုတ်ပါဘူး။ အဲဒါဟာ ကပ်ပယ်အိတ် ပင်ပန်းသွားလို့၊ ဒါမှမဟုတ် စိတ်ဖိစီးမှု များလို့ ဖြစ်တာပါ။ ဒါပေမယ့် အမြဲလိုလိုဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်တော့ အဲဒါဟာ ပန်းသေပန်းညှိုး ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ တစ်နှစ်ကို အမေရိကန်က ယောက်ျားပေါင်း ၁၅ သန်းကနေ သန်း ၃၀ အထိ ဒီရောဂါကို ခံစားနေရပါတယ်။ အသက်ကြီးလာတာနဲ့ ပန်းသေပန်းညှိုးဖြစ်ဖို့ များလာပေမယ့် အဲဒါဟာ ရှောင်လွှဲလို့ မရတာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ပန်းသေပန်းညှိုးရောဂါကို ရှောင်လွှဲနိုင်ဖို့ လိုက်နာရမယ့် အချက် ၁၀ ချက်ကို အောက်မှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
၁. ကိုယ်အလေးချိန် ထိန်းပါ
ကိုယ်အလေးချိန်ကို ကျန်းမာနေအောင် ထိမ်းသိမ်းတာဟာ လိင်အင်္ဂါ တောင့်တင်းစေဖို့နဲ့ သွေးကြောတွေ ကောင်းမွန်နေအောင် ကာကွယ်ဖို့အတွက် အရေးကြီးပါတယ်။ သွေးကြောတွေမကောင်းလို့ သွေးလုံလောက်အောင် မရရင် လိင်တံ တောင့်တင်းဖို့ ခက်ခဲလာစေပါတယ်။ အဝလွန်ခြင်းနဲ့ ဆက်စပ်နေတဲ့ ဆီးချိုရောဂါဟာလဲ လိင်တံက အာရုံကြောတွေကို ထိခိုက်စေပါတယ်။
၂. လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်ပါ
သင် ကိုယ်အလေးချိန် ပုံမှန်ဆိုရင်တောင် လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်တာဟာ သင့်ရဲ့ လိင်မှု စွမ်းဆောင်ရည်ကို တိုးတက်စေပါတယ်။ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်သူတွေမှာ ပန်းသေပန်းညှိုးဖြစ်ဖို့နည်းကြောင်း လေ့လာတွေ့ရှိရပါတယ်။ လေ့ကျင့်ခန်းဟာ စိတ်ဖိစီးမှုကို လျော့ကျစေပြီး လိင်ကိစ္စမှာ စိတ်ကျေနပ်မှု ပိုရစေပါတယ်။
၃. အစားအသောက် ဆင်ခြင်ပါ
ပန်းသေပန်းညှိုးဖြစ်မှာ စိုးရိမ်တဲ့ ယောက်ျားတွေဟာ နှလုံးအတွက် ကောင်းမွန်တဲ့ အစာ အာဟာရကို စားပေးသင့်ပါတယ်။ သွေးလှည့်စနစ်ဟာ လိင်အင်္ဂါအတွက် အရေးကြီးလို့ပါ။ သစ်သီးတွေ၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေ၊ အဆီမပါတဲ့ အသားတွေဟာ အရမ်းအထောက်အကူပြုပါတယ်။
အိပ်ရေးမဝခြင်းဟာ လိင်တံထောင်မတ်နေမှုကို လျော့နည်းစေတာ တွေ့ရပါတယ်။ လိင်တံဟာ အိပ်ရေးဝပြီး အားပြည့်နေတဲ့ အချိန်မှာ အထောင်မတ်ဆုံးပါ။ မနက်ပိုင်းအချိန်မှာ လိင်ဆက်ဆံပေးရင် ပိုကျေနပ်မှု ရစေမှာပါ။
၅. စိတ်ဖိစီးမှုကို ရှောင်ကျဉ်ပါ
စိတ်ဖိစီးမှုဟာ လိင်မှုကိစ္စနဲ့ လိင်တံ ထောင်မတ်နေစေဖိုိ့ကို အများကြီး ဆိုးကျိုးသက်ရောက်စေပါတယ်။ စိတ်ဖိစီးမှုဟာ အသက်အရွယ်တိုင်းမှာ ဖြစ်ပေါ်နိုင်လို့ လူငယ်တွေလဲ လူကြီးတွေလို ပန်းညှိုးနိုင်တာပါ။ တရားထိုင်ခြင်း၊ ယောဂနဲ့ အနှိပ်ခံခြင်းတို့ဟာ စိတ်ဖိစီးမှုကို ဖြေဖျောက်နိုင်ပြီး ပန်းညှိုးမှုကို လျော့ကျစေပါတယ်။
၆. ကြွက်သားကြီးထွားစေတဲ့ စတီးရွိုက်ဆေးတွေ မသုံးပါနဲ့
စတီးရွိုက်ဆေးတွေဟာ မြုံခြင်း၊ သုတ်ကောင်အရေအတွက် လျော့နည်းခြင်းနဲ့ တက်စတိုစတီရုန်းဟော်မုန်းလယ်ဗယ်တွေကို ကမောက်ကမ ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ သုံးစွဲတာ အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှ တက်စတိုစတီရုန်းဟော်မုန်းထွက်ရှိမှု လျော့နည်းသွားပြီး ပန်းညှိုးစေပါတယ်။ အလုံးစုံ ပြန်ကောင်းဖို့ လူအပေါ်နဲ့ သောက်ခဲ့တဲ့ ပမာဏအပေါ် မူတည်ပြီး ၃ လကနေ ၁၂ လ အချိန်ယူရပါတယ်။
၇. အရက် ကြည့်သောက်ပါ
အရက်မူးနေရင် လိင်ကောင်းကောင်းမဆက်ဆံနိုင်ပါဘူး။ အရက်ကို ထိန်းပြီး သောက်ခြင်းဟာ အန္တရာယ် မရှိပေမယ့် အရက်ကိုမဆင်မခြင် အရမ်းသောက်ရင် အသည်းပြသနာတွေနဲ့ အာရုံကြောစနစ်ကို ထိခိုက်စေပြီး ပန်းသေပန်းညှိုး ဖြစ်ပွားစေပါတယ်။
ဆေးလိပ်ဟာ လိင်တံကျန်းမာရေးရဲ့ အဓိကရန်သူပါ။ ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းဟာ လိင်တံထောင်မတ်ဖို့ အဓိကလိုအပ်တဲ့ သွေးကြောမျှင်လေးတွေကို ကျဉ်းသွားစေပါတယ်။ ဆေးလိပ်မသောက်တဲ့သူတွေမှာ ပိုပြီးမာကြောသန်မာတဲ့ လိင်တံတွေရှိပြီး ပိုပြီး စွမ်းဆောင်နိုင်ကြပါတယ်။
၉. တက်စတိုစတီရုန်း လျော့နည်းမှုကို သတိပြုကြည့်ပါ
တက်စတိုစတီရုန်းဟာ လိင်တံတောင်မတ်စေတဲ့ ယောက်ျားဟော်မုန်းပါ။ သင့်ရဲ့ တက်စတိုစတီရုန်းလယ်ဗယ်တွေ လျော့နည်းနေရင် ပန်းသေပန်းညှိုးဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ ပင်ပန်းလာတာ၊ အမွှေးအမျှင်တွေ လျော့နည်းလာတာ၊ ကြွက်သားလျော့နည်းလာတာနဲ့ လိင်ကိစ္စမှာ စိတ်ဝင်စားမှု လျော့နည်းလာတာတွေက တက်စတိုစတီရုန်း လျော့နည်းနေတဲ့ လက္ခဏာတွေပါ။
၁၀. ကြမ်းတမ်းတဲ့ လိင်ဆက်ဆံပုံကို ရှောင်ကျဉ်ပါ
လိင်တံဟာ ကျိုးနိုင်ပါတယ်။ လိင်တံမှာ အရိုးမပါပေမယ့် ကွေးလိုက်ရင် စုတ်ပြဲသွားနိုင်တဲ့ ရာဘာလို အရွတ် ၂ ခုနဲ့ ထိန်းထားတာပါ။ မိန်းမက အပေါ်မှာနေတဲ့ ပုံစံနဲ့ ဒေါ်ဂီစတိုင်တွေမှာ ကွေးမိသွားတာ အများဆုံးပါ။ လိင်တံ တောင်မတ်မှု လျော့နည်းနေရင်လည်း လိင်ဆက်ဆံတဲ့ အခါမှာ ကွေးတတ်ပါတယ်။ အဲဒါဟာ အရမ်းနာကျင်ပြီးတော့ လိင်တံကို ဒဏ်ရာရစေပါတယ်။ ပြန်ကောင်းသွားရင်လည်း ကျန်ခဲ့တဲ့ အနာရွတ်တွေကြောင့် လိင်တံ ကောင်းကောင်းသွေးမလျှောက်တော့ရင် ပန်းသေပန်းညှိုး ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
ပနျးသပေနျးညှိုးရောဂါ ကာကှယျဖို့ နညျးလမျး ၁၀ ခု
တဈခါတဈလမှော ထောငျမတျမလာတာက ပနျးသပေနျးညှိုးရောဂါကွောငျ့ မဟုတျပါဘူး။ အဲဒါဟာ ကပျပယျအိတျ ပငျပနျးသှားလို့၊ ဒါမှမဟုတျ စိတျဖိစီးမှု မြားလို့ ဖွဈတာပါ။ ဒါပမေယျ့ အမွဲလိုလိုဖွဈနမေယျဆိုရငျတော့ အဲဒါဟာ ပနျးသပေနျးညှိုး ဖွဈနိုငျပါတယျ။ တဈနှဈကို အမရေိကနျက ယောကျြားပေါငျး ၁၅ သနျးကနေ သနျး ၃၀ အထိ ဒီရောဂါကို ခံစားနရေပါတယျ။ အသကျကွီးလာတာနဲ့ ပနျးသပေနျးညှိုးဖွဈဖို့ မြားလာပမေယျ့ အဲဒါဟာ ရှောငျလှဲလို့ မရတာတော့ မဟုတျပါဘူး။ ပနျးသပေနျးညှိုးရောဂါကို ရှောငျလှဲနိုငျဖို့ လိုကျနာရမယျ့ အခကျြ ၁၀ ခကျြကို အောကျမှာ ဖျောပွထားပါတယျ။
၁. ကိုယျအလေးခြိနျ ထိနျးပါ
ကိုယျအလေးခြိနျကို ကနျြးမာနအေောငျ ထိမျးသိမျးတာဟာ လိငျအင်ျဂါ တောငျ့တငျးစဖေို့နဲ့ သှေးကွောတှေ ကောငျးမှနျနအေောငျ ကာကှယျဖို့အတှကျ အရေးကွီးပါတယျ။ သှေးကွောတှမေကောငျးလို့ သှေးလုံလောကျအောငျ မရရငျ လိငျတံ တောငျ့တငျးဖို့ ခကျခဲလာစပေါတယျ။ အဝလှနျခွငျးနဲ့ ဆကျစပျနတေဲ့ ဆီးခြိုရောဂါဟာလဲ လိငျတံက အာရုံကွောတှကေို ထိခိုကျစပေါတယျ။
၂. လကေ့ငျြ့ခနျး လုပျပါ
သငျ ကိုယျအလေးခြိနျ ပုံမှနျဆိုရငျတောငျ လကေ့ငျြ့ခနျး လုပျတာဟာ သငျ့ရဲ့ လိငျမှု စှမျးဆောငျရညျကို တိုးတကျစပေါတယျ။ လကေ့ငျြ့ခနျးလုပျသူတှမှော ပနျးသပေနျးညှိုးဖွဈဖို့နညျးကွောငျး လလေ့ာတှရှေိ့ရပါတယျ။ လကေ့ငျြ့ခနျးဟာ စိတျဖိစီးမှုကို လြော့ကစြပွေီး လိငျကိစ်စမှာ စိတျကနြေပျမှု ပိုရစပေါတယျ။
၃. အစားအသောကျ ဆငျခွငျပါ
ပနျးသပေနျးညှိုးဖွဈမှာ စိုးရိမျတဲ့ ယောကျြားတှဟော နှလုံးအတှကျ ကောငျးမှနျတဲ့ အစာ အာဟာရကို စားပေးသငျ့ပါတယျ။ သှေးလှညျ့စနဈဟာ လိငျအင်ျဂါအတှကျ အရေးကွီးလို့ပါ။ သဈသီးတှေ၊ ဟငျးသီးဟငျးရှကျတှေ၊ အဆီမပါတဲ့ အသားတှဟော အရမျးအထောကျအကူပွုပါတယျ။
အိပျရေးမဝခွငျးဟာ လိငျတံထောငျမတျနမှေုကို လြော့နညျးစတော တှရေ့ပါတယျ။ လိငျတံဟာ အိပျရေးဝပွီး အားပွညျ့နတေဲ့ အခြိနျမှာ အထောငျမတျဆုံးပါ။ မနကျပိုငျးအခြိနျမှာ လိငျဆကျဆံပေးရငျ ပိုကနြေပျမှု ရစမှောပါ။
၅. စိတျဖိစီးမှုကို ရှောငျကဉျြပါ
စိတျဖိစီးမှုဟာ လိငျမှုကိစ်စနဲ့ လိငျတံ ထောငျမတျနစေဖေို့ကို အမြားကွီး ဆိုးကြိုးသကျရောကျစပေါတယျ။ စိတျဖိစီးမှုဟာ အသကျအရှယျတိုငျးမှာ ဖွဈပျေါနိုငျလို့ လူငယျတှလေဲ လူကွီးတှလေို ပနျးညှိုးနိုငျတာပါ။ တရားထိုငျခွငျး၊ ယောဂနဲ့ အနှိပျခံခွငျးတို့ဟာ စိတျဖိစီးမှုကို ဖွဖြေောကျနိုငျပွီး ပနျးညှိုးမှုကို လြော့ကစြပေါတယျ။
၆. ကွှကျသားကွီးထှားစတေဲ့ စတီးရှိုကျဆေးတှေ မသုံးပါနဲ့
စတီးရှိုကျဆေးတှဟော မွုံခွငျး၊ သုတျကောငျအရအေတှကျ လြော့နညျးခွငျးနဲ့ တကျစတိုစတီရုနျးဟျောမုနျးလယျဗယျတှကေို ကမောကျကမ ဖွဈစနေိုငျပါတယျ။ သုံးစှဲတာ အခြိနျကွာလာတာနဲ့အမြှ တကျစတိုစတီရုနျးဟျောမုနျးထှကျရှိမှု လြော့နညျးသှားပွီး ပနျးညှိုးစပေါတယျ။ အလုံးစုံ ပွနျကောငျးဖို့ လူအပျေါနဲ့ သောကျခဲ့တဲ့ ပမာဏအပျေါ မူတညျပွီး ၃ လကနေ ၁၂ လ အခြိနျယူရပါတယျ။
၇. အရကျ ကွညျ့သောကျပါ
အရကျမူးနရေငျ လိငျကောငျးကောငျးမဆကျဆံနိုငျပါဘူး။ အရကျကို ထိနျးပွီး သောကျခွငျးဟာ အန်တရာယျ မရှိပမေယျ့ အရကျကိုမဆငျမခွငျ အရမျးသောကျရငျ အသညျးပွသနာတှနေဲ့ အာရုံကွောစနဈကို ထိခိုကျစပွေီး ပနျးသပေနျးညှိုး ဖွဈပှားစပေါတယျ။
ဆေးလိပျဟာ လိငျတံကနျြးမာရေးရဲ့ အဓိကရနျသူပါ။ ဆေးလိပျသောကျခွငျးဟာ လိငျတံထောငျမတျဖို့ အဓိကလိုအပျတဲ့ သှေးကွောမြှငျလေးတှကေို ကဉျြးသှားစပေါတယျ။ ဆေးလိပျမသောကျတဲ့သူတှမှော ပိုပွီးမာကွောသနျမာတဲ့ လိငျတံတှရှေိပွီး ပိုပွီး စှမျးဆောငျနိုငျကွပါတယျ။
၉. တကျစတိုစတီရုနျး လြော့နညျးမှုကို သတိပွုကွညျ့ပါ
တကျစတိုစတီရုနျးဟာ လိငျတံတောငျမတျစတေဲ့ ယောကျြားဟျောမုနျးပါ။ သငျ့ရဲ့ တကျစတိုစတီရုနျးလယျဗယျတှေ လြော့နညျးနရေငျ ပနျးသပေနျးညှိုးဖွဈစနေိုငျပါတယျ။ ပငျပနျးလာတာ၊ အမှေးအမြှငျတှေ လြော့နညျးလာတာ၊ ကွှကျသားလြော့နညျးလာတာနဲ့ လိငျကိစ်စမှာ စိတျဝငျစားမှု လြော့နညျးလာတာတှကေ တကျစတိုစတီရုနျး လြော့နညျးနတေဲ့ လက်ခဏာတှပေါ။
၁၀. ကွမျးတမျးတဲ့ လိငျဆကျဆံပုံကို ရှောငျကဉျြပါ
လိငျတံဟာ ကြိုးနိုငျပါတယျ။ လိငျတံမှာ အရိုးမပါပမေယျ့ ကှေးလိုကျရငျ စုတျပွဲသှားနိုငျတဲ့ ရာဘာလို အရှတျ ၂ ခုနဲ့ ထိနျးထားတာပါ။ မိနျးမက အပျေါမှာနတေဲ့ ပုံစံနဲ့ ဒျေါဂီစတိုငျတှမှော ကှေးမိသှားတာ အမြားဆုံးပါ။ လိငျတံ တောငျမတျမှု လြော့နညျးနရေငျလညျး လိငျဆကျဆံတဲ့ အခါမှာ ကှေးတတျပါတယျ။ အဲဒါဟာ အရမျးနာကငျြပွီးတော့ လိငျတံကို ဒဏျရာရစပေါတယျ။ ပွနျကောငျးသှားရငျလညျး ကနျြခဲ့တဲ့ အနာရှတျတှကွေောငျ့ လိငျတံ ကောငျးကောငျးသှေးမလြှောကျတော့ရငျ ပနျးသပေနျးညှိုး ဖွဈစနေိုငျပါတယျ။
Previous: ဘာကြောင့် ဆီးအောင့်မထားသင့်တာလဲ
Next: ထိတ်လန့်စရာ တစ်ကိုယ်ရည်စိတ်ဖြေမှု အလွဲများ